किन खुम्चियो माओवादी ? : यस्तो छ विश्लेषण – BRTNepal
किन खुम्चियो माओवादी ? : यस्तो छ विश्लेषण
बिआरटीनेपाल २०७४ असार १८ गते १९:३३ मा प्रकाशित
पहिलो चरणमा १० नगरपालिका जितेको माओवादीले दोस्रो चरणको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा तीनवटा नगरपालिकाबाहेक अन्यमा जित हासिल गर्न सकेको छैन । निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बन्ने दाबी नगरे पनि प्रतिस्पर्धी कांग्रेस-एमालेकै हाराहारीमा ‘स्ट्रोङ थर्ड’ (बलियो तेस्रो शक्ति) हुने आकलन माओवादी केन्द्रको थियो । तर, माओवादीले यसपटक आफ्नै बलियो आधार इलाका मानिएको रोल्पाकै पनि तीनवटा तह गुमाएको छ । रोल्पाको दुई तह एमाले र एउटा कांग्रेसले माओवादीको पोल्टाबाट खोस्न सफल भएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अहिलेसम्म जितेको नगरपालिकामध्ये एउटा रोल्पा नगरपालिका, अर्को बर्दियाको बाह्रबर्दिया नगरपालिका तथा तेस्रो अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका मात्रै हो ।
उम्मेदवार परिचित नभएकाले पनि परिणाम अपेक्षाकृत माओवादीको पक्षमा नदेखिएको हो । ०४८ सालका केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानीय निर्वाचन लडेको अनुभाव पनि माओवादीसँग थिएन । ‘पहिलो हुने निर्वाचन भनेको पपुलर इमेज भएकाले जित्ने हो, त्यसो भएन भने पार्टीको टिकटले मात्र पनि निर्वाचन जितिँदैन’, रोक्काले भन्नुभयो, ‘माओवादीमा पपुलर इमेज भएका उम्मेदवार सहरमा देखिएनन्, जसकारण परिणाम सकारात्मक आउन सकेन ।’ कसलाई टिकट कसले कसरी दिएको छ भन्ने कुराले पनि निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित बनाउने परिणामहरूले देखाएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।